Sida Loogu Soo Diiro Emailkaaga Compendium
Video: Compendium: BCC Bloggaaga?
Jimco, Abriil 15, 2011 Sabtida, Janaayo 23, 2021 Douglas Karr
Ku xiga Martech Zone fiidiyowgu wuxuu la socdaa dadka aqaan ee aan jeclahay - Isku-darka. Haa haa, sidoo kale waxaan ku leeyahay saamiyada maareynta maareynta iyo shirkadda daabacaadda.
Maaddaama aan saami leeyahay ma jecli inaan ka hadlo iyaga aad badan, laakiin dhawaanahan waxay si dhab ah u qabanayeen shaqo weyn. Waa tan kii ugu dambeeyay ee taxanaheena fiidiyowga ee shirkadaha Teknolojiyada Suuq geynta.
Hal-ku-dhigga Chris iyo Compendium ee nuxurka meel kasta, iyo meel kasta waa barta on. Sameynta nidaam uu wakiilkaaga adeegga macmiilku uga jawaabi karo emayl, ka dibna e-maylkaas waxaa looga faa'iideysan karaa boostada (ka dib markii loo maro habka oggolaanshaha iyo tifaftirka) waa wax cajiib ah. Max wuu ku saxanyahay - shirkaduhu waxay soo saaraan malaayiin doolar oo ah waxyaabo maalinle ah oo aan si fudud looga faa'iideysan.
Compendium waxay kusii socotaa hal abuurka wadadan waxayna siineysaa kaabayaal taageeri kara ururada ugu waaweyn. Waa xal fudud dhib aad u adag. Hambalyo Frank Dale - Madaxweynaha cusub ee Compendium. Markuu xoogaa waqti la qaatay Frank usbuucyadii la soo dhaafay, runti wuxuu farta ku fiiqay halka ay meheraddu usocoto iyo waliba baahida shirkadaha ka faaideysanaya waxyaabaha… meel kasta, iyo meel kasta!
Mahadsanidiin kooxda at 12 Xidigood Media wax soo saar kale oo weyn! Haddii aad tahay shirkad fog oo aad jeclaan lahayd in laguu iftiimiyo taxanaheena fiidiyowga - nala soo xiriir. Haddii aad daboosho kharashyada wax soo saarka (aad u jaban) oo aad waxyaabo badan oo waaweyn aad isla gaysay - waan daabici doonnaa!
Baadhitaano Fudud oo lagu heli karo Platform Email kasta
Video: Hal-abuurka waxaa lagu gaaray xallinta dhibaatooyinka
Apr 18, 2011 at 6: 34 PM
Kaliya qaar faallooyin farsamo: Waxaa ugufiican in af hayeenku ku hadlo asalka kaamerada; fiidiyowgaan xagal-kamaraddii labaad gebi ahaanba waa la xiray, iyadoo la muujinayo oo keliya muuqaalka afhayeenka. Fikrad ahaan, Kaamirada mid waa inay ka sarreysaa garabka wareysiga, oo leh dhexdhexaad dhexdhexaad ah oo ku saabsan mowduuca ugu muhiimsan. Talaalka ugu weyni waa caadi, inkasta oo aanu fiicnayn, maxaa yeelay wuxuu ku tusayaa labada qof muuqaal ahaan, sidaas awgeedna waa in loo adeegsadaa oo keliya kala-goyn - marka xigta ee aan u dhaqaajiyo kamaradda xoogaa yar xagga wareysiga, sidaasna aan ugu xaglinayo qofka la wareysanayo. Furitaanku wuu fiicnaa iyadoo wareystaha u jeestay dhanka kamaradda.
Makarafoonnada sifiican looma dhigo, sidaas awgeed xoogaa fiiro gaar ah ayey u siinayaan qolka.
Laakiin way fiicantahay inaad fiidiyowyo sidan oo kale ah sameyso, mahadsanid!
Apr 18, 2011 at 8: 34 PM
gnurx, faallooyinkaaga farsamo waa fiican yihiin. Waad ku mahadsan tahay wadaagista! Xubnaha Kooxdayadu waxay had iyo jeer ka shaqeeyaan sidii loo hagaajin lahaa tayada fiidiyowyadeenna oo aan u bogaadinno jawaab celinta. Waxaan rajeynaynaa inaad markale nagala soo qaybgasho bisha soo socota muuqaal fiidiyow kale.